Fifandraisan'ny rehetra amin'ny alàlan'ny Cloud: Ahoana ny fomba hanatratrarana azy? | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | | Tutorials / Manuals / Tips, maro
Ny fampandrosoana ankehitriny ny Teknolojia momba ny fifandraisana sy ny fifandraisana (TIC) dia nametraka ny tontolo maoderina, indrindra eo amin'ny sehatry ny fanomezana asa aman-draharaha, serivisy ara-barotra sy ara-bola, na miankina na tsy miankina, ho tombontsoan'ny mpampiasa azy (mpanjifa sy olom-pirenena), ny filàna ny rafitra momba ny fampahalalam-baovao (IS) hiaraha-miasa hatrany.
Mahafantatra sy mahatakatra tsara ny singa tsirairay manodidina ny lohahevitry ny Interoperability of Information Systems, amin'ny alàlan'ny Cloud (Internet), dia tena ilaina amin'ny olona rehetra, na tsotra na matihanina, hatramin'ny nanamafisana ny fifandraisana teo amin'ny Organisation amin'izy ireo, sy ireo sy ny Governemanta amin'ny fampivoarana ny programa na serivisy, fampidirana, fifamatorana ary fifamenoana tsara kokoa, hiteraka fanohananan'ny olom-pirenena bebe kokoa izany, ary avy eo, amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana rehetra.
3.2 Fifandraisan'ny fikambanana
3.3 Fifampitohizana ara-teknika
3.4 Governemanta mifampitantana
Ny idealy afaka mizara angona (fampahalalana) amin'ny fomba rehetra sy mangarahara, izany hoe, na inona na inona teknolojia manohana ny fitehirizana, ny fikarakarana na ny fizarana azy, Nanaraka ny fivoaran'ny olona sy ny fivoaran'ny TIK hatramin'ny niandohany. Izay rehetra noforonin'olombelona hatramin'ny fanoratana (litera, isa, isam-potoana) ka hatramin'ny Media ankehitriny (Gazety, Radio, TV ary Internet) dia manana tanjona kendrena amin'ny fanatontosana ny fifandraisana, fifampiresahana ary ny fahazoana.
Araka izany, ny fanatsarana na fanatsarana ny fepetra (teknolojia, fitaovana, sehatra) amin'ny fifanakalozam-baovao dia tokony ho lafiny transendental na ho an'ny fikambanana na entity ary ho an'ny firenena tsirairay amin'ny ankapobeny, mba hahatratrarana ny fivoaran'ny vahaolana amin'ny solosaina izay mandresy ny fetra sy hadisoana taloha. Ny fetra sy lesoka nateraky ny fivoarana ara-teknolojia mifototra amin'ny filana (takiana) manokana, izay manome ny "Nosy Computer".
Ireo nosy informatika izay miavaka amin'ny fikirakirana fampahalalana tsy mahomby sy tsy mifandanja, izay mahatonga ny fifandraisana eo amin'izy ireo ho tsy azo atao ary manakana, ohatra, fa ny fombafomba ataon'ny Fanjakana dia azon'ny olom-pirenena atao amin'ny toerana tokana. Noho io antony io, ohatra, dia mikasa ny hametraka varavarankely elektronika tokana amin'ny fanjakana ny governemanta mba hahafahan'ny olom-pirenena sy ny fikambanana manatanteraka ny fomba fanaony amin'ny Internet. Ary ny Fikambanana dia mikasa ny hanao ny vokatrao sy ny serivisin'izy ireo hifanaraka kokoa sy iraisan'ny rehetra momba ny an'ny hafa.
Ary eo indrindra no misy ny foto-kevitry ny Interoperability. Ny hevitra izay afaka manana fandikana maro misy fiovana kely, fa amin'ny tranga maro dia matetika no aseho toy ny:
"Ny fahafahan'ny ICT Systems, sy ny fizotran'ny orinasa tohanan'izy ireo, hanakalo data sy hahafahana mizara vaovao sy fahalalana". (ECLAC, Vondrona eropeana, 2007) (Lueders, 2004)
Ny voambolana fampahalalam-baovao sy teknolojia ISO / IEC 2382 dia mamaritra ny foto-kevitry ny Interoperability toy ny:
"Ny fahaizana mifampiresaka, manatanteraka programa, na mamindra angona misy eo amin'ireo singa miasa isan-karazany mba tsy hananan'ny mpampiasa fahafantarana ireo mampiavaka azy manokana." (ISO, 2000)
Ho an'ny hafa, indrindra amin'ny sehatra governemanta na politika, ny famaritana ny fiaraha-miasa matetika dia faritana hoe:
«ny fahafahan'ny fikambanana tsy mitovy sy isan-karazany mifanerasera amin'ny tanjona nifanarahana. Ny fifandraisana dia midika fa mizara fampahalalana sy fahalalana amin'ny alàlan'ny dingana eo anelanelan'ny andrim-panjakana ireo fikambanana voarohirohy, amin'ny alàlan'ny fifanakalozana data miaraka amin'ireo rafitra teknolojian'ny fampahalalana tsirairay avy ”
Zavatra iray izay matetika adika, toy ny fikarohana ataon'ny governemanta hikatsahana hanome serivisy serivisy ho an'ny daholobe ho an'ny fiaraha-monina misy azy ireo (Citizens and Organisations) mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fanatsorana ny rezistra (hisorohana ny famerenana ny fangatahana fampahalalana na ny fizotrany), ary ny Window tokana (hisorohana ny fikorontanan'ny fikambananana na ny minisitra ary ny tsy fahampian'ny fandrindrana).
Ny bibliographie sasany matetika dia mizara ny Interoperability amin'ny dingana 4 na karazana, dia:
Izy io dia miahiahy amin'ny fiantohana fa azo takarina ny tena dikan'ny fampahalalana natakalo tsy misy ambangovangony amin'ireo rindranasa rehetra voarohirohy amin'ny fifanakalozana iray ary ahafahan'ny rafitra manambatra ny fampahalalana voaray amin'ireo loharanom-baovao hafa ary manodina azy ireo araka ny tokony ho izy.
Izy io dia mifandraika amin'ny famaritana ny tanjon'ny orinasa, ny fizotry ny maodely ary ny fanamorana ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy fitantanana izay maniry ny hifanakalo vaovao ary mety hanana firafitry ny fandaminana sy ny fizotrany anatiny. Ary torolàlana, mifototra amin'ny fepetra takian'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa, ny serivisy izay tsy maintsy misy, mora fantarina, azo idirana ary mifantoka amin'ny mpampiasa.
Manarona olana ara-teknika (HW, SW, Telecom), ilaina hifaneraserana ireo rafi-draharaha sy serivisy informatika, ao anatin'izany ny lafiny lehibe toy ny interface malalaka, serivisy fifandraisana, fampidirana data sy ny afovoany, fampisehoana sy fifanakalozana, fidirana sy serivisy fiarovana.
Rehefa mandray anjara amin'ny fizotran'ny fiaraha-miasa ny Fanjakana (Governemanta) dia mitranga io dingana na karazana io io dia manondro ny fifanarahana misy eo amin'ny governemanta sy ireo mpisehatra voakasiky ny fizotran'ny fifampiraharahana sy ny fomba fanatanterahana izany. Miaraka amin'ny fitantanan-draharaha dia kendrena ny manana fahefana eo amin'ny andrim-panjakana mba hametrahana fenitra mifandraika amin'ny fiaraha-miasa, hiantohana ny fananganana azy ireo, ary hanome ireo masoivoho manana ny fahaiza-manao sy ny teknika ilaina hampiharana azy ireo.
Betsaka ny teknolojia efa misy hahatratrarana ny fizotran'ny fifampiraharahana, indrindra eo amin'ny sehatry ny governemanta. Ny iray amin'izy ireo dia matetika ny fampiasana ny Serivisy amin'ny Internet (Serivisy amin'ny Internet na WS), izay tsy inona fa ny andiam-panadihadiana sy fari-pitsipika iray izay afaka mifanakalo data eo amin'ny fampiharana (Apps).
Ny WS dia manamora ny fifanakalozana data eo amin'ireo Apps samihafa novolavolaina tamin'ny fiteny samihafa, ary novinaina tamin'ny sehatra OS isan-karazany, mba hahafahan'izy ireo aseho amin'ny Device, Equipment na Platform mifandraika amin'ny Internet. WSs dia maodely miasa vaovao ho an'ny rindranasa hifandraisana amin'ny Internet.
Ary mitondra tombony sarobidy ho an'ny fizotran'ny fiaraha-miasa izy ireo satria mamela ny Apps na inona na inona toetrany na sehatra fanatanterahana azy ireo hifampiresaka, amin'ny alàlan'ny fametrahana fenitra sy kaody mifototra amin'ny soratra, manamora ny fidirana amin'ny atiny (Fampahalalana / angon-drakitra) ary ny fahatakarana tsara ny fiasan'izy ireo.
Anisan'ireo fenitra fampiasa indrindra amin'ny WS ananantsika:
XML: XML (Fiteny fanoratana lavitra)
Savony: SOAP (Protocol Access Access Simple)
WSDL: WDSL (Fiteny famaritana ny serivisy amin'ny Internet)
UDDI: UDDI (Famaritana manerantany, fahitana sy fampidirana)
Anisan'ireo karazana WS malaza indrindra ny:
Serivisy amin'ny Internet miorina amin'ny SOAP: Io dia mampiasa hafatra XML manaraka ny fenitra SOAP, ary mampiasa WSDL ao amin'ny interface-dry zareo.
Serivisy amin'ny Internet mifototra amin'ny fitsaharana: Izay mampiasa HTTP, URI, MIME, hampiharina amin'ny fotodrafitrasa tsotra na tsy dia sarotra loatra.
Ny fikarohana ny fifandraisan'ny rafitra samihafa, na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina, na eo amin'izy ireo, afaka mitombo amin'ny fomba tsara, ny tombontsoa sy ny tombony, ara-tsosialy na ara-barotra, betsaka ho an'ny olom-pirenena tsotra, toy ny manam-pahaizana matihanina na mpandraharaha lehibe na mpitarika politika.
Ny homogenisation ny fifanarahana, ny fizotrany ary ny maritrano dia afaka manatsara ny fahafaha-manome sy manome fahafaham-po ny entana, vokatra ary serivisy mifanaraka amin'izany, manalefaka ny fiantraikan'ny lesoka mety hitranga amin'ny ora, ny asa na ny tsy fitoviana.
Ireo toerana rehetra voalaza etsy ambony ireo dia ny Interoperability ho singa iray lehibe hanomezana ny tsirairay ny serivisy serivisy ho an'ny daholobe sy tsy miankina ilaina, mahomby sy amin'ny vidiny ambany indrindra. Ny fampihenana ny tsy fahombiazana, ny duplications, ny fahasosorana ary na ny vidiny fanampiny aza.
Ary na dia amin'ny tranga sasany aza, mahazoa fampitomboana ny fidirana na dia avo kokoa aza ny fampahalalana avo lenta sy ny fiasa mahasoa, avy amin'ny tontolo tokana amin'ny fomba azo ampiharina sy azo antoka kokoa, izany hoe amin'ny fomba mahomby kokoa, mahasoa, misokatra, azo antoka, tsy miankina, malefaka ary mifaninana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fifandraisan'ny rehetra amin'ny alàlan'ny Cloud: Ahoana ny fomba hanatratrarana azy?
Ny Fuchsia OS RC voalohany dia navoaka herinandro lasa izay ary vitsy no nahatsikaritra
DragonRuby: kitapom-batsy miampita sehatra hanaovana lalao video miaraka amin'i Ruby